ILAY TENA RANO VELONA – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 janvier 18, 2016 Laisser un commentaire sur ILAY TENA RANO VELONA
«Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha fantatrao ny fanomezan’Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia hianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano velona.» (Jaona 4:10)
Io tenin’Andriamanitra ao amin’ny Jaona 4:10 io indray no entintsika milomano ao anatin’ny Jaona 4:1-26 manontolo. Dia hitantsika ao, araka izany tokoa fa resaka rano no anton-dresak’I Jesosy tamin’ilay vehivavy Samaritana izay heverina fa tsy manan-draharaha amin’ny Jiosy akory.
Mpatsàka rano ravehivavy; ary Jesosy mihintsy no tonga manatona azy amin’izany asany izany. Mampahafantatra amin-dravehivavy ny halalin’ny zava-miafin’ny Famonjena Jesosy. Ny RANO no anoharany izany, satria izay no iveloman-dravehivavy. Hitantsika tsara fa tamin’io fihaonan’I Jesosy tamin-dravehivavy io dia am-pahafantariny azy ny tena maha Mesia an’i Jesosy (And 26). Taorian’izay dia nahatsiaro faly tokoa ravehivavy satria tamin’ny fihaonany voalohany tamin’ny Tompo no nahatsapany fa nahita ny Mesia tokoa izy. Jereo tsara anie, fa hatreo dia lasa nandeha nitantara ny zavatra hitany sy reny ny momba an’i Jesosy tamin’ny olona rehetra tao an-tanàna izy. Satria hoy ny Tompo taminy: «Fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay.»(Jaona 4:14); ary hoy koa Izy: «Izaho Izay miresaka aminao no Mesia» (Jaona 4:26b). Tonga fantatry ny tao an-tanàna Jesosy ary nankeo aminy avokoa ny olona rehetra.
Ry hava-malala ao amin’ny Tompo, Tsaroanao ve ny fihaonanao voalohany tamin’i Jesosy. Mety ho tao anatin’ny fifalianao tanteraka ianao tamin’izay ka dia nampahereziny hatrany. Nefa koa; mety ho tamin’ny alalan’ny ady sarotra izay natrehanao: mety ho narary mafy angamba na tojo fahoriana! Tsy afa-panadinana na tsy nahita asa ivelomana ! Nilàn’ny olona sasany ady na sotasota! Nianjadiam-pahasahiranana maro samihafa! Nefa nomen’ny Tompo Teny mamy ka dia tonga mahery am-panahy. Inona no nanamarika izany teo amin’ny fiainanao? Tsapanao ve fa Izy no Mesia? Tsy nitady Azy lavitra ianao fa tonga avy hatrany teo aminao kosa Izy nitondra fifaliana sy fampaherezana ary fiadanana ho anao. Hatraiza anefa ny fahatsapànao ny halalin’izany fitiavana izany? Ny fahatsapàna manandanja ao aminao mantsy no ahaizanao mandeha mizara izany amin’ny hafa. Ny Teniny mamy izay nomeny ho anao no ILAY TENA RANO VELONA miboiboika tsy hitsahatra ao anatinao. Misy tsy mbola nihaona tamin’i Jesosy mihitsy any ho any. Miandry anao izy ireny hizara izay azonao. Tsarovy fa tao amin’ny fantsakàna no nihaonan-dravehivavy tamin’i Jesosy. Ny fantsakàna izay ivoahan’ny loharano ka anovozan’ny olona rehetra ny rano ivelomany. Ny Fiangonana no fantsakàna. Mialoha anao ho ao Jesosy. Ao Izy no miandry anao. Te hihaona aminao ao Izy anio. Izy Ilay Teny tonga nofo no ILAY TENA RANO VELONA miboiboika tsy mitsahatra ho fiainana mandrakizay ho an’izay rehetra manatona Azy. Ento ny namanao , ny havanao, ny mpiara-monina sy ny mpiara-miasa aminao; ary tariho ny firenena ho eo aminy. Ampy mizara ho antsika rehetra ny fahasoavany. Tsy hangetaheta fahotana intsony ianao rehefa mivelona ao amin’i Jesosy fa tonga manana fiainana mandrakizay. Na manao ahoana na manao ahoana; mahita fifaliana lehibe ihany koa ianao rehefa mahatarika olona maro ho ao aminy. Ho aminao anie ny fiadanan’ny Tompo. Ho Azy irery ny voninahitra. Amen!
Publié parfilazantsaramada janvier 18, 2016 Publié dansUncategorized